Sawirro: M/weyne Deni oo ku lebisan tuutaha ciidanka ayaa gaarey Bosaso – MANABOLYO NEWS
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo diyaarad gaar ah ka qaaday magaalada Garoowe ayaa maanta si deg deg ah u gaarey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kadib weerarkii xalay ee xabsiga dhexe.
Madaxweynaha oo ku lebisan dharka gaarka ah ee ciidanka ayaa waxaa markii uu gaarey garoonka diyaaradaha Boosaaso uu durba kulamo la bilaabay maamulka gobolka Bari iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka ammaanka gobolka Bari.
War kooban oo lagu daabacay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu la xiriiro u kuurgelidda xaaladda ammaan ee magaalada Boosaaso uuna kulamo la qaadan doono maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka ammaanka.
Taliyaha qeybta Booliska gobolka Bari G/S Xusen Cali Maxamuud oo warbaahinta lahadlay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey qaabkii uu u dhacay weerarkii xalay khasaaraha nafeed oo ka soo gaarey ciidanka dowladda.
Wasiirka Maaliyada oo doonaayo in uu gurmad dhaqaaale u diro GEDO
Ciidamada Farmaajo oo xertey Daljirka iyo kuwa Mucaaradka oo soo buux dhaafshey Magaalada